सभापति उठ्नु नै पर्ने बाध्यता यसकारण आइलाग्यो रामचन्द्रलाई ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सभापति उठ्नु नै पर्ने बाध्यता यसकारण आइलाग्यो रामचन्द्रलाई !
नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल बाध्यताले उठ्नुपर्ने भएको छ । उनले अहिलेसम्म सभापतिमा उठ्ने खासै रहर गरेका छैनन् तर समीकरण मिलाउनुपर्दा उनी उम्मेदवार नबन्दा संकट देखिने सम्भावना छ ।
यो समूहबाट शेखर कोइराला, सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरु सभापति उठ्ने तयारीमा छन् । नयाँ विधान अनुसार पदाधिकारी नै ठूलो हुने भएकाले ती पदमा उम्मेदवार मिलाउन पनि सभापतिको नेतृत्व देखाउन मिल्ने हुनुपर्छ ।
पौडेलबाहेक अरु उम्मेदवार भए पदाधिकारीमा तालमेल मिलाउन समस्या हुने त्यही समूहका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । ‘पौडेलबाहेक अरु सभापतिको उम्मेदवार भए उपसभापति, महामन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने संकट पर्छ’ एक नेताले भने ‘पौडेललाई सबैले मान्ने भएकाले उनको नेतृत्वमा जो पनि अरु पदाधिकारीमा उठ्न सक्छन् तर अरुको नेतृत्व हुँदा समान हैसियत ठान्नेहरु उम्मेदवार नहुने सम्भावना छ ।’ ती नेताले गुटलाई बलियो बनाउन अन्तिममा आएर पौडेल नै सभापति उठ्न सक्ने बताए ।
उता संस्थापन समूहबाट सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । देउवाले अरुलाई प्रतिष्पर्धी नै ठानेका छैनन् । देउवालाई सशांक उठे भने खतरा हुने भनेर आंकलन गर्न थालिएको छ । वर्तमान महामन्त्री रहेका उनलाई कार्यकर्ताले विपीको छोरो भनेर मात्र महामन्त्री बनाएका थिए ।
तर पनि उनले पार्टीमा त्यति सक्रियता देखाएका छैनन् । नेता तथा कार्यकर्ताले सशांकले पार्टीलाई हाँक्न सक्छन् भन्ने पत्याएका पनि छैनन् । अर्को समूहमा विवाद बढी भएकाले आफू सजिलै सभापति हुन्छु भन्नेमा देउवा ढुक्क छन् ।
सिंह, सशांक र विमलेन्द्र निधिले आफूहरुले कांग्रेसको विरासत बोकेर आएकाले जसरी भए पनि यसपालि देउवालाई हराउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । ती नेताहरुबीच पनि साझा उम्मेदवार को बन्ने भन्ने टुंगो छैन । पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार १७ पटक भएर हारेको आरोप लागेको छ । महाधिवेशन अन्यौल बन्दै जाँदा पौडेलले सभापति देउवालाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद कायम रहँदा पछिल्लो समयमा घोषित इकाई तहको भदौ १८ गते गर्ने भनिएको अधिवेशन नै अन्यौलमा परेको छ । कांग्रेसले मंसिर ९ देखि १३ सम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।